Rudo | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
nei ini pandinoshamiswa ndiri kunyatsoyerera
Nei ndichiyerera zvakanyanya kana ndichifara? Nekuti zvisikwa zvakazviita, uye hongu, kana ukayerera, zvinoreva kuti iwe unoda bonde. Yekupedzisira pasi chete ichabvunza izvi ... ...
top xnumx anime pro rudo
top 10 anime nezverudo Mischievous kiss. "5 cm pasekondi" ndiyo inonyanya kuzivikanwa. Asi ini ndinoda rake "Izwi riine ...
Nzira yekutarisa murume uyu ndeyepi kana kwete?
Maitiro ekutarisa kana mukomana ari kunyepa kana kwete? Kuti uedze mukomana, tarisa kumeso kwake, masaini, mamiriro uye mafambiro. Ungaziva sei zviratidzo zvekunyepa. Mirayiridzo Dambudziko rekuomarara: Hazvisi nyore nhanho 1 Zviratidzo zvekunze ndizvo zvakanyanya ...
nzira yekurasikirwa uremu nekukurumidza kuishandisa?
maitiro ekudzora uremu nekukurumidza, kurovedza muviri? Ini ndinobvumirana nezvinhu zvakawanda, asi kana chiri chikafu, idya ZVESE zvachose, uine chiitiko chemuviri, macalorie akapiswa, asi usadye)))))))) Unoda kudzikira uremu nekukurumidza? Izvi zvinogoneka kana, mukuwedzera kune kudya kwakaringana, iwe uchiita muviri ...
Nyora nhetembo dzakanaka kwazvo pamusoro pe rudo nehupenyu
Nyora nhetembo dzakanakisa kwazvo nezve rudo uye hupenyu rudo rudo nezvimwe .. unofarira sei rwiyo? =) Ndinoziva kukuda iwe. Ini ndinogona kufema iwe. Ndinokwanisa…
Pano, ivo vanoti - kana iwe ukarota munhu, saka anofunga nezvako .. iwe unoti kudini? Pfungwa dzinochinja?
Pano, ivo vanoti - kana ukarota munhu, saka anofunga nezvako .. iwe unoti kudini? Pfungwa dzinochinja? Iwe unofunga nezvake, kwete iye nezvako ... zvinosuwisa ... Pamwe ...
Minyengetero ipi ndeyomudiwa?
minamato ipi iripo yemudiwa? Mwari zorora mweya wake! Baba mumunamato wangu ndinotendeukira kwamuri. Sevha uye chengetedza moyo wako wega, Dzivirira kubva kugodo nenhema, Kune wako ...
Ndezvipi zvinodiwa kuti mufaro wemukadziwo zvake?
Chii chinodiwa mukadziwo zvake kuti afare? Mumwe nemumwe wedu anoda chimwe chinhu chakakosha kuti afare, asi vazhinji vedu tine mhuri yakati kurei ine hushamwari, uko murume ane hanya uye akazvipira murume nengirozi vana. Mukadzi mudiki sei ...
Unotsvaga sei muchiUukraine Ndinoda iwe?
Sei kuperetera nenzira kwayo muUkraine NDINOKUDAI? Zvinonzwika zvakanyanya kunaka: Ndiri kohayu kwauri !!! kana ndiri kokhayu iwe! I tebe cohayu 🙂 I cohayu you Ukrainian "ndinokuda" ...
nyora rondedzero pa "rudo muhupenyu hwemunhu"
nyora rondedzero pamusoro wenyaya "rudo muhupenyu hwemunhu" Rudo muhupenyu hwemunhu ndeimwe yemanzwiro akakosha anosangana nemunhu ... Kubva pakuzvarwa chaiko .. tinoda amai, baba, hama ... tobva takura ...
Batsira !!! Iwe unoda mazano akawanda kumusikana, mazwi anofadza, zvido, izvo zvinogona !!! Nyora munhu wese !!!
Batsira !!! Isu tinoda rumbidzo zhinji kumusikana, mazwi anofadza, uye chii chishuwo! Nyora imwe neimwe !!! tsvarakadenga, akangwara, ane hanya, ane moyo munyoro, anotapira, anoyevedza, anoyevedza, akasiyana, asingatsanangurike, asingakanganwiki, asingadzivisike, chic, anopenya, anodakadza, ...
Ropa rudzi uye ukama hune rudo
Kufungidzira kwerudo. Kufarira kwenguva pfupi newaunoshanda naye. Kudanana kusingasunge pagungwa. Rudo rwakafanana nehope. Imwe neimwe zano ine magamba ayo. Uye zvinoitika kuti muchiitiko chimwe nechimwe isu ...
Mazera ese anozviisa pasi porudo - ichi ichokwadi! Nekudaro, pamazera akasiyana IZVI zvinoitika nekusaenzana kusimba ... Ngatiedzei kutsvaga mukana? Zvinotaridza kwatiri kuti chishuwo chekuita bonde chinotsanangurwa nerudo, kuda kana, pa ...
pacifist ndiani uyu?
pacifist ndiani uyu? Uyo anoshora chero hondo uye anomiririra kumiswa nekudzivirira A pacifist ndiye munhu anoda kuumba runyararo munyika anosarudza zvese nenzira yerunyararo. Kiyi ...
Unonzwisisa sei kuti munhu ane godo?
Sei kunzwisisa kuti murume ane godo? Anove akashata kwazvo uye anoita zvese nekushora. Ndingafare kuti anga asina godo. Yangu ine godo rinotyisa. Cheque kufona, kufona manheru anotarisa uko ...
iwe unogona sei kudana iwe?
ungaita sei kuti ufonere Anya ??? Anyuta ... Annushka, Anyuta, Anechka, Nyusha, Nyusechka, Nyurochka, Annette, Anna mwenje…. chishamiso ..., nyasha dzaMwari (aya ndiwo mashandurirwo aanobva kune mamwe maHeberu), Nyurok, Nusik ... asi chete ...
Ndeapi mashoko akanaka iwe unogona kutaura kumurume?
ndeapi mazwi akanaka aungataure kumukomana? Iwe wakanaka kwazvo, wakangwara, unoshamisa ... dzimwe nguva ndinofunga - sei tiri pamwe chete ... uye ndinonzwisisa ... Iwe uri hafu yangu, nehafu + nehafu = imwe huru, ...
Nzira yekuwira sei murudo neCapricorn Woman?
Sei kudanana mukadzi Capricorn? mutsaukoi unoita kuCapricorn kana hove?)) Mukadzi wese anoda yake yakasarudzika nzira yakasarudzika))) gadzira chirongwa uye enda kumberi))))) sarudzo A yatadza (((hapana B ichabatsira))) kubudirira)))) ...
Musikana haamupe Kumupa chigaro chehuni mumusoro wake - anozochipa ipapo ipapo. Waita zvakanaka musikana. Une rombo rakanaka iwe. Chengetedza f. Mukadzi akagadzika zvakanaka haadi foreplay. Kana iwe uchida kuve nemoyo murefu, kwete izvi zvakakosha ...
Nzira yekuedza sei manzwiro evanhu? verenga mukati.
Maitiro ekutarisa manzwiro emurume? verenga mukati. Edza kumukumbira rubatsiro. Zvakanaka, ipapo, nekombuta kana dambudziko renhare. Mukoke kumba. ... Kana iwe ukataura zvakanyanya, ipapo iwe unonzwisisa ... kana ...
Mibvunzo ye79 mu database yakagadzirwa mu 0,680 masekondi.